Imibhiyozo engakumbi ye-Apple ngoMhla woMhlaba nge-Apple Watch njenge-protagonist | Ndisuka mac
I-Apple yinkampani ezinikele kwindalo esingqongileyo, ibonisa ngokufuziselayo, unxibe oluhlaza emhlabeni. Kodwa ayikhawulelwanga ekwenzeni isenzo sendalo esikhuthazwayo kubunkokheli bomyalelo kwaye ngesahlulo sigcina into kwirhafu ngokutsalwa. Iyaqhubeka ngakumbi, ibandakanya abathengi bayo ekunyamekeleni okusingqongileyo. Ngesi sihlandlo, uphakamisa imisebenzi enxulumene nokuzilolonga kunye nokusetyenziswa kweApple Watch, njengemveliso yohlobo oluchaphazela kakhulu umhlaba wangaphandle, iilali kunye nokusingqongileyo.
Ukuba unayo i-Apple Watch kunye nangoMgqibelo olandelayo umhla we-22, iApple ikunika umceli mngeni: nikela ubuncinci ngaphezulu kwemizuzu engama-30 yokuzilolonga ngaphandle, kuba I-Apple ifuna ukukuvuza ngebhaso kunye nezitikha ezahlukeneyo Usuku loMhlaba olukhethekileyo lokusetyenziswa kunye neMiyalezo yenkqubo.
Thatha ezitalatweni ukubhiyozela uSuku loMhlaba ngo-Epreli 22 kwaye uphumelele ibhaso. Hamba uhambo, ugijime, ibhayisikili, isitulo esinamavili, okanye umzuzu wokuhamba ngokubhukuda we-30, kwi-app yokuzivocavoca okanye nayiphi na insiza yomntu wesithathu othumela ukusebenza kwi-app yezeMpilo. Uyakufumana izincamathelisi ezikhethekileyo zemiyalezo.
Imele umceli mngeni wesithathu kwiApple, eqikelelwa iApple Watch okoko yaqala ukwenza olu hlobo lwesicwangciso ngo-2015. Ezi zimbini zangaphambili zenziwa:
En UmbuleloIsindululo sakhe ibikukuhamba iikhilomitha ezi-5.
Kwihayi intshaIzigqibo ezilungileyo zeza nesindululo sokuvala imisesane emithathu ngosuku, iiveki ezintathu zokuqala zikaJanuwari.
Ezi ntlobo zamanyathelo ziyaxatyiswa ngumenzi okhumbula abathengi emva kokuthenga imveliso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Imibhiyozo engakumbi ye-Apple ngoMhla woMhlaba nge-Apple Watch njenge-protagonist